ရဲလေးနဲ့အတူ သီချင်းဗီဒီယိုမှာ သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကြက်တောင်မယ်လေး သက်ထားသူဇာ အဆိုတော်/သရုပ်ဆောင် ရဲလေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရဲလေးကတော့ လတ်တလောမှာလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေကို ပြင်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ကို မကြာခင်မှာ ပရိသတ်တွေလက်ထဲထည့်ပေးတော့မယ့်အကြောင်းကို […]
၂ ပတ်အတွင်း ၈ ပေါင် ဝိတ်ကျသွားတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်နည်းလမ်း ရိသတ်ကြီးရေ ခင်သဇင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မျက်နှာချိုချို၊ ချစ်စဖွယ်အပြုံးနဲ့ အတူ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အဆီအပိုမရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးချောလေးကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါနော်…ဒါ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ကစ်ကစ်နေမကောင်းဖြစ်တော့ ရောဂါစဖြစ်ကတည်းက ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးကလည်း […]
လမ်းခွဲသွားတဲ့ချစ်သူ နေခြည်ဦးကို သူ့ဆီပြန်လာဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ အောင်နွေဦး
လမ်းခွဲသွားတဲ့ချစ်သူ နေခြည်ဦးကို သူ့ဆီပြန်လာဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ အောင်နွေဦး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စီးပေးတတ်ပြီး ဂရုစိုက်ကြလွန်းတဲ့ နေခြည်ဦးနဲ့ အောင်နွေဦးတို့ အတွဲလေးက ပရိသတ်တိုင်း အားကျခဲ့ရတဲ့ အတွဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ(၁၃) ရက်နေ့မှာတော့ နေုခြည်ဦးက အောင်နွေဦးနဲ့ နောက်တတွေမရှိပဲ လမ်းခွဲလိုက်ပြီးလို့ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ […]
ဘယ်လောက်ပဲ တောင်းပန်ပါစေ ပြတ်သားစွာဆောင်ရွက်ဖို့ သဘင်အစည်းအရုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ကောင်းကျော် ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော်ကြီး ကောင်းကျော် ဟာဆိုရင် ရွှေညီအစ်ကို ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော်အဖွဲ့နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု များစွာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ ဟာသ ပညာတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲပျော်ရွှင်စေခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ […]
“ဖိုက်စတားလူရွင်တော်အဖွဲ့” အား ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မှ ခေါ်ယူသတိပေး
“ဖိုက်စတားလူရွင်တော်အဖွဲ့” အား ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မှ ခေါ်ယူသတိပေး Channel K မှ စီစဉ်တင်ဆက်ပြီးတိုက်ရိုက် Live လွှင့်ခဲ့သည့် သက်ကြီးလူရွှင်တော်ကန်တော့ပွဲအခမ်း အနားတွင် လူရွှင်တော် အ ဖွဲ့ ပေါင်း များစွာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည် …. ။ ထိုအခမ်းအနားတွင် ဖိုက်စတားလူရွှင်တော် အဖွဲ့ဝင်များတင်ဆက်ခဲ့သည့် ပျက်လုံးများသည် လက်ရှိ […]
ဆင်ဆာဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် (ရုပ်သံ)
ဆင်ဆာဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် (ရုပ်သံ) “တချို့အခန်းတွေက ဆင်ဆာအဖြတ်ခံရတယ် …။ တချို့အခန်းတွေက ဝါးခံရတယ်၊ တချို့ဝတ်တာ ပုံစံချင်းတူတာတောင်မှ သူများတွေလဲဖြတ်တယ် …… ကိုယ့်လဲဖြတ်တယ်ဆိုတာက ကိစ္စမရှိဘူးလေ၊ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုမှ ကွက်ဖြတ်တယ်ဆိုရင် ဝမ်းနည်းမိမှာတော့ အမှန်ပဲ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆင်ဆာဖြတ်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကပြောပါတယ် …။ […]
မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံကို သရုပ်ပျက်ဝတ်ဆင်မှုကြောင့် အရေးယူခြင်းခံရတော့မယ့် ဆယ်လီတစ်ဦး (ရုပ်သံ)
မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံကို သရုပ်ပျက်ဝတ်ဆင်မှုကြောင့် အရေးယူခြင်းခံရတော့မယ့် ဆယ်လီတစ်ဦး (ရုပ်သံ) မြန်မာ့သဘင်အစည်းအရုံးကနေ ဒီနေ့မှာတော့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံကို သရုပ်ပျက်ဝတ်ဆင်တဲ့ သူကို ရေးယူတော့မယ်ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် …။ သဘင်လောကမှ အနုပညာရှင်များက မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံကို သရုပ်ပျက်ဝတ်ဆင်ပြီး ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ဆယ်လီတစ်ဦးကို ရှုံ့ချခဲ့တာတွေ့ရတာကြောင့် ခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ မိုမိုလေး ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် […]
အားနေတင်ကိုပဲပြနေတာ..ဘယ်ယောက်ျားမှတန်ဖိုးမထားဖူးတဲ့…ပြောရက်လိုက်တာ…. ” ဘယ်ယောကျာ်းကမှ တန်ဖိုးထားချင်မှာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့ ပရိသတ်ကိုတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဆုအိမ့်စံ ” မနေ့က သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့က သူရိယတစ်ယောက် ဆုအိမ့်စံနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ အင်တာဗျူးကြောင့် ပရိသတ်တွေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရိယရဲ့ အင်တာဗျူးတက်လာပြီါ် နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ ဆုအိမ့်စံက လက်ရှိဖြစ်နေ တဲ့ […]
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြခဲ့တဲ့ Ku Hye Sun ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြခဲ့တဲ့ Ku Hye Sun ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်အနုပညာစုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ Ahn Jae Hyun နဲ့ Ku Hye Sun တို့ ၂ ယောက်ဟာ အခုဆိုရင် တရားဝင်ကွာရှင်းကြဖို့အတွက် အတိအလင်းကြေညာပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီး ဒီအတောတွင်းမှာလည်း သူတို့ ၂ […]